FIKAMBANAN’NY MPIVAROTRA AO MANAKARA : Mankalaza ny fahafolo taonany amin’ity taona ity
Toy ny sehatra rehetra ihany, manana ny fikambanany izay mijoro sy miorina ara-dalàna ny mpivarotra ao Bazary any Manakara. 28 novembre 2017
Fantatra àry fa feno folo taona amin’ity 2017 ity izany fikambanan’ny mpivarotra bazary ao Manakara izany amin’izao fotoana izao. Araka ny fantatra dia ny 08 novambra 2007 no nijoroan’ny fikambanana, ka katroka tsara ny fahafolo taonany amin’ity novambra 2017 ity.
Ny fikambanana izay hafohezina amin’ny anarana hoe “Fimpibama” na ny fikambanan’ny mpivarotra ao bazary ao Manakara. Hetsika ara-panatanjahantena, toy ny lalao baolina kitra ambony fasika no nentina nanamarihana ny fankalazana. Lalao izay nikatrohan’ny kaominina ambonivohitr’i Manakara sy ny ekipan’ny Fimpibama teny amin’ny torapasik’i Manakarabe ny alahady tolakandro lasa teo. Niondrika tamin’ny isa 3 noho 1 ny ekipan’ny kaominina, saingy ho fampanjakana ny « Fair play » dia natolotra an-kafaliana ho azy ireo ihany ny amboara lehibe. Izany no natao dia mba ho fahatsiarovana ihany koa ny fikambanana amin’izao fankalazana ny fahafolo taonany izao.
Nisy ny hetsika fankalazana tsy tanteraka
Etsy ankilany dia tokony notanterahina ny 20 novambra lasa teo ny fankalazana izay saika nanaovana ny hetsika fanadiovana faobe, ny ivelany sy ny ao anatin’ny bazary be ao Antanambao Manakara. Hetsika izay tokony mbola tafiditra ao anatin’ny ady amin’ny fiparitahan’ny valan’aretina pesta ihany koa. Tsy tanteraka anefa izany hetsika izany noho ny antony maro samihafa, isan’izany ny toetr’andro ka dia hahemotra amin’ny fotoana manaraka.
Hofaranana amin’ny alim- pandihizana ao amin’ny toeram-pilanonana iray any an-toerana ny 02 desambra ho avy izao kosa ny fankalazana. Raha tsiahivina dia anisany tanjon’ity fikambanana ity ny hanome tombontsoa manokana ho an’ny mpanjifa sy ny mpivarotra. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin’ny fanjakana amin’ny fanaraha-maso ny lalànan’ny fivarotana. Ankoatr’izay dia anisan’ny antom-pisian’ny Fimpibama ny fanamafisan’orina ny firaisankinan’ny mpivarotra, mba hijerena ny eo amin’ny lafiny sosialy. Nanambara ny filohan’ny fikambanana fa mbola hisy ny hetsika manokana hanamafisana ny fankalazana ny fahafolo taonan’ny Fimpibama.